Nagu saabsan - Wuxi Lusheng Qalabka Sirdoonka Co., Ltd.
Wuxi Lusheng Intelligent Equipment Co., Ltd waxay ku taalaa magaalad dalxiis qurux badan oo caan ah- Wuxi. Shirkaddayadu waxaa la aasaasay 2004, waxay ahayd horumar joogto ah hordhac iyo tababar hibooyin, jaangoynta maareynta iyo dhismaha dhaqanka shirkadaha. Haatan shirkadeenu waxay haysataa hanti dhan toban milyan oo dheeraad ah waxayna daboolaysaa aag dhan 6,000 oo mitir murabac ah. Wax soo saarkayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Qalabka Alxanka otomaatiga ah, Qalabka Jarista CNC iyo Qalabka Beveling, Khadadka Waxsoosaarka Pipe / Wind Tower iyo wixii la mid ah. Waxyaabahani waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa aagga mashiinnada injineernimada, mashiinnada kiimikada, soosaarayaasha weelka kululeeyaha / cadaadiska, mashiinnada macdanta qodista, nidaamka tamarta nukliyeerka iyo wixii la mid ah. Badeecadeenu waxay sifiican ugu iibisaa in kabadan 20 gobol gudaha suuqa gudaha, badeecooyin badan ayaa loo dhoofiyay Koonfur Bari Aasiya, Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo Koonfurta Ameerika, Oceania, iwm.
Sannado badan shirkadeena waxaa ka go'an cilmi baarista, horumarka, hada waxaan heysanaa awood farsamo oo xoog leh iyo karti nashqadeyn. Waxaan lasiiyay ISO9001 Shahaadada Nidaamka Tayada iyo heerarka CE ee Yurub.
Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa maraakiibta cadaadiska, kiimikada kiimikada, xarumaha tamarta, mashiinada culus, maraakiibta, qaababka birta iyo warshadaha kale. Iyo dejinta adeegyo gaar ah: waxay bixiyaan qalabyada qaabdhismeedka birta, dayactirka iyo adeegyada kale ee hal-joogsi ah. Iyada oo hal-abuurnimo joogto ah iyo hal-abuurnimo, shirkaddu waxay ku guuleysatay horumar joogto ah, deg-deg ah oo caafimaad leh iyada oo loo marayo horumarka sayniska iyo farsamada, maaraynta jaangooyooyinka iyo dhismaha dhaqanka shirkadaha. Waxyaabaha ugu waaweyn ee ay soo saarto shirkadda waa: qalab dhameystiran oo qalabka alxanka ah, xarumaha shaqada ee alxanka qaaska ah, khadadka wax soo saarka qaabdhismeedka birta, qalabka koontaroolka tirada, qalabka daahan nadiifinta, qalabka wax soo saarka munaaradda tamarta dabaysha. Badeecadaha ayaa sifiican ugu iibiya in kabadan 20 gobol iyo magaalooyin wadanka oo dhan, waxaana loo dhoofiyaa in kabadan 30 wadan iyo gobolo kuyaala Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Yurub iyo Ameerika. Iyo "Oerlikon"; "Alston" iyo shirkadaha kale ee caalamiga ah ee 500 oo adag waxay aasaaseen xiriir iskaashi oo wanaagsan oo waara.
Dadku u janjeedho, daacad iyo waxqabad, hal abuur iyo ganacsi, kuna soo noqo bulshada.
Sarraynta kalsoonida, qofka isticmaala marka hore, qanacsanaanta tayada, gaarsiinta waqtiga loogu talagalay, wuxuu diyaar u yahay inuu si daacadnimo leh kulashaqeeyo oo uu uhormariyo gacan qabashada.
Si diiran u soo dhaweyso macaamiisha cusub iyo kuwii hore, si sax ah u faham baahida macaamiisha; xakamaynta nidaamka tayada adag, hubinta wareejinta bixinta qandaraaska; raadinta tayada waqtiga ku habboon, oo si dhakhso leh u maareeya diidmada tayada.